Jehovha Anokudzivirira Sei? | Nharireyomurindi Yekudzidza
“Ishe akatendeka, uye achakusimbisai, okudzivirirai pane akaipa.”—2 VAT. 3:3.
1. Nei Jesu akakumbira Jehovha kuti achengetedze vadzidzi vake?
USIKU hwake hwekupedzisira asati aurayiwa, Jesu aifunga nezvematambudziko aizosangana nevadzidzi vake. Kuda kwaaiita shamwari dzake, ndiko kwakaita kuti akumbire Baba vake kuti ‘vadzichengetedze pane akaipa.’ (Joh. 17:14, 15) Jesu aiziva kuti kana achinge adzokera kudenga, Satani Dhiyabhorosi aizoramba achirwisa munhu wese anoda kushumira Jehovha. Saka zviri pachena kuti vanhu vaJehovha vanoda kudzivirirwa.
2. Chii chingaita kuti tive nechokwadi chekuti Jehovha anopindura minyengetero yedu?
2 Jehovha akapindura munyengetero waJesu nekuti anoda Mwanakomana wake. Kana tikaedza kuita zvese zvatinogona kuti tifadze Jehovha, naiyewo achatida uye achapindura minyengetero yedu yekukumbira kubatsirwa uye kudzivirirwa. Jehovha ndiBaba vane rudo nemhuri yavo, saka acharamba achiva nehanya nevana vake. Kana akasaita izvozvo, zvingaita kuti zita rake kana kuti mukurumbira wake usvibiswe!
3. Nei tichida kudzivirirwa naJehovha mazuva ano?
3 Iye zvino ndipo patava kuda kunyanya kudzivirirwa naJehovha. Satani “akatsamwa kwazvo” nekudzingwa kwaakaitwa kudenga. (Zvak. 12:12) Anoita kuti vamwe vanhu vatitambudze vachifunga kuti vari kuitira “Mwari basa dzvene.” (Joh. 16:2) Vamwe vanhu vasingatendi muna Mwari vanotitambudza nekuti takasiyana nevanhu vari munyika. Pasinei nezvingaita kuti vanhu vatitambudze, hatityi. Nei tisingatyi? Nekuti Shoko raMwari rinoti: “Ishe akatendeka, uye achakusimbisai, okudzivirirai pane akaipa.” (2 VaT. 3:3) Jehovha anotidzivirira sei? Ngatikurukurei zvinhu zviviri zvaanoita.
JEHOVHA ANOTIPA ZVIPFEKO ZVEMURWI
4. Maererano naVaEfeso 6:13-17, chii chatinopiwa naJehovha chinotidzivirira?
4 Jehovha anotipa zvipfeko zvemurwi zvinogona kutidzivirira patinorwiswa naSatani. (Verenga VaEfeso 6:13-17.) Zvipfeko izvi zvemurwi zvinobva kuna Mwari zvakasimba uye zvinonyatsotidzivirira. Asi zvinongotidzivirira chete kana tikaramba takapfeka zvese. Chipfeko chimwe nechimwe chinomiririrei? Ngatikurukurei chimwe nechimwe chazvo.
Zvipfeko Zvemurwi Zvinomiririrei?
Ona Ndima 5-11
5. Bhandi rechokwadi chii, uye nei tichifanira kuripfeka?
5 Bhandi rechokwadi rinomiririra chokwadi chinowanika muShoko raMwari, Bhaibheri. Nei tichifanira kupfeka bhandi iri? Nekuti Satani ‘ndibaba venhema.’ (Joh. 8:44) Ava nezviuru zvemakore achinyepa uye ‘achitsausa nyika yese’! (Zvak. 12:9) Asi chokwadi chiri muBhaibheri chinotidzivirira kuti tisanyengedzwa. Tinopfeka sei bhandi iri rekufananidzira? Tinoita izvozvo nekudzidza chokwadi nezvaJehovha, kumunamata “mumweya nemuchokwadi,” uye nekuva vakatendeseka pazvinhu zvese zvatinoita.—Joh. 4:24; VaEf. 4:25; VaH. 13:18.
Bhandi: Chokwadi chiri muShoko raMwari
6. Chinhu chinovharidzira chipfuva, chekururama chii, uye nei tichifanira kuchipfeka?
6 Chinhu chinovharidzira chipfuva, chekururama chinomiririra mitemo yaJehovha yakarurama. Nei tichifanira kupfeka chinhu chinovharidzira chipfuva? Sezvo chinhu chinovharidzira chipfuva chichidzivirira mwoyo wemusoja kuti usabayiwa, chinhu chinovharidzira chipfuva, chekururama, chinodzivirirawo mwoyo wedu wekufananidzira kuti usakanganiswa nenyika ino. (Zvir. 4:23) Jehovha anotarisira kuti timude uye timushumire nemwoyo wedu wese. (Mat. 22:36, 37) Saka Satani anoedza kuita kuti tisashumira Jehovha nemwoyo wedu wese nekuita kuti tide zvinhu zviri munyika yake uye zvinovengwa naJehovha. (Jak. 4:4; 1 Joh. 2:15, 16) Kana izvozvo zvikasashanda, anoedza kutimanikidza kuti tiite zvinhu zvisingafadzi Jehovha.
Chinhu chinovharidzira chipfuva: Mitemo yaJehovha
7. Tinopfeka sei chinhu chinovharidzira chipfuva, chekururama?
7 Tinopfeka chinhu chinovharidzira chipfuva, chekururama nekuteerera mirayiro yaJehovha uye kurarama maererano nayo. (Pis. 97:10) Vamwe vanoona sekuti mirayiro yaJehovha inotishayisa rusununguko. Asi kana tikarega kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri muupenyu hwedu, tinenge takafanana nemusoja anobvisa chinovharidzira chipfuva ari muhondo nekuti anenge achifunga kuti chinonyanya kurema. Ikoko kupusa chaiko! Kana tichida Jehovha, mirayiro yake “hairemi,” asi inoponesa.—1 Joh. 5:3.
8. Zvinorevei kuti tsoka dzedu dzipfeke mashoko akanaka atakagadzirira kuzivisa?
8 Pauro anotikurudzira kuti tsoka dzedu dzipfeke mashoko akanaka erugare atakagadzirira kuzivisa. Izvozvo zvinoreva kuti tinofanira kugara takagadzirira kuparidza mashoko akanaka eUmambo. Patinoudza vamwe mashoko ari muBhaibheri, kutenda kwedu kunowedzera kusimba. Tinokurudzirwa patinoona kuti vanhu vaJehovha pasi rese vari kushandisa mikana yese yavanowana kuti vaparidze. Semuenzaniso, vanoparidza kubasa kana kuchikoro, pavanenge vachiita basa repaimba neimba, kana kuti mundima yebhizinesi, pavanoenda kunotenga, pavanoshanyira veukama vasiri zvapupu kana kuti pavanotaura nevamwe vanhu vavanoziva. Kana tikatya torega kuparidza, tinogona kufanana nemusoja anobvisa shangu dzake muhondo; tsoka dzake dzinogona kukuvadzwa zviri nyore. Saka zvinogona kuzomuomera kuti azvidzivirire uye haazokwanisi kutevedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wake.
Shangu: Kugadzirira kuparidza mashoko akanaka
9. Nei tichifanira kutakura nhoo huru yekutenda?
9 Nhoo huru yekutenda inomiririra kutenda kwatinoita muna Jehovha. Tinotenda kuti achazadzisa zvese zvaakavimbisa. Kutenda ikoko kuchatibatsira ‘kudzima miseve yese inobvira inokandwa neakaipa.’ Nei tichifanira kutakura nhoo huru iyi? Nekuti inotidzivirira kuti tisatsauswa nedzidziso dzevakatsauka pakutenda uye tisaodzwa mwoyo nezvinotaurwa nevanotishora. Kana tisina kutenda, tinoshaya simba rekuteerera Jehovha vamwe pavanoedza kutifurira kuti tisamuteerera. Asi pese patinoramba kuita zvinhu zvisingadiwi naJehovha kubasa kana kuti kuchikoro, kutenda kwedu kunenge kuchitidzivirira. (1 Pet. 3:15) Pese patinoramba basa rinotipa mari yakawanda asi richikanganisa kushumira kwatinoita Jehovha, kutenda kwedu kunenge kuchitidzivirira. (VaH. 13:5, 6) Pese patinoshumira Jehovha pasinei nekupikiswa tinenge tichichengetedzwa nenhoo yedu.—1 VaT. 2:2.
Nhoo: Kutenda kwatinoita muna Jehovha uye vimbiso dzake
10. Chii chinonzi ngowani yeruponeso, uye nei tichifanira kuipfeka?
10 Ngowani yeruponeso itariro yatinopiwa naJehovha, tariro yekuti achatiponesa parufu uye kuti achapa mubayiro vese vanoita kuda kwake. (1 VaT. 5:8; 1 Tim. 4:10; Tito 1:1, 2) Kungofanana nengowani inodzivirira musoro wemusoja, tariro yeruponeso inodzivirira mafungiro edu. Inoadzivirira sei? Tariro iyoyo inotibatsira kuti tirambe takaisa pfungwa pane zvakavimbiswa naMwari uye inotibatsira kuti tisanyanya kunetseka nematambudziko edu. Tinopfeka sei ngowani iyi? Tinoita izvozvo nekuramba tichiita kuti mafungiro edu aenderane neaMwari. Semuenzaniso, hatiisi tariro yedu papfuma inogona kungoparara asi pana Mwari.—Pis. 26:2; 104:34; 1 Tim. 6:17.
Ngowani: Tariro yekurarama nekusingaperi
11. Bakatwa remweya chii uye nei tichifanira kurishandisa?
11 Bakatwa remweya iShoko raMwari, Bhaibheri. Bakatwa iroro rine simba rekufumura unyengeri hwese uye simba rekusunungura vanhu padzidziso dzenhema nemaitiro akaipa. (2 VaK. 10:4, 5; 2 Tim. 3:16, 17; VaH. 4:12) Tinodzidza kushandisa bakatwa iroro patinodzidza tiri tega uye patinodzidziswa nesangano raMwari. (2 Tim. 2:15) Kuwedzera pazvipfeko zvemurwi, Jehovha ane imwe nzira ine simba yaanotidzivirira nayo. Ndeipi iyoyo?
Bakatwa: Shoko raMwari, Bhaibheri
12. Chii chimwe chatinoda uye nei tichichida?
12 Musoja agara nebasa anoziva kuti haakwanisi kurwisa uto guru ari ega; anoda kubatsirwa nemamwe masoja. Isuwo hatikwanisi kurwisa Satani nevateveri vake tiri tega; tinoda kubatsirwa nehama nehanzvadzi dzedu. Jehovha akatipa ‘sangano rehama’ dziri munyika yese idzo dzinoda kutibatsira.—1 Pet. 2:17.
13. Maererano naVaHebheru 10:24, 25, tinobatsirwa sei nekupinda misangano yedu?
13 Imwe nzira yatinobatsirwa nayo ndeyekupinda misangano yedu. (Verenga VaHebheru 10:24, 25.) Tese tinomboora mwoyo dzimwe nguva, saka patinenge tichinzwa saizvozvo, misangano inogona kutikurudzira. Tinokurudzirwa nemhinduro dzinobva pamwoyo dzinopiwa nehama nehanzvadzi dzedu. Hurukuro dzavanopa uye kuenzanisira kwavanoita, zvinotikurudzira kuti tirambe tichishumira Jehovha. Uye tinokurudzirwa patinotaura navo misangano isati yatanga uye painenge yapera. (1 VaT. 5:14) Misangano yedu inotipawo mukana wekuwana mufaro unobva pakubatsira vamwe. (Mab. 20:35; VaR. 1:11, 12) Misangano yedu inewo zvimwe zvainotibatsira. Inotibatsira kuti tive vaparidzi uye vadzidzisi vari nani. Semuenzaniso, tinodzidza kushandisa zvinhu zviri muBhokisi reMaturusi Ekudzidzisa. Saka nyatsogadzirira misangano. Nyatsoteerera paunenge uri pamisangano. Kana musangano wapera, shandisa zvaunenge wadzidza. Kana ukaita izvozvo, uchava “murwi akanaka waKristu Jesu.”—2 Tim. 2:3.
14. Ndivanaani vamwe vanogona kukubatsira?
14 Tinotsigirwawo nemamiriyoni engirozi dzine simba. Funga zvinogona kuitwa nengirozi imwe chete! (Isa. 37:36) Chifunga zvinogona kuitwa neuto rengirozi rine simba. Hapana munhu kana dhimoni rinogona kukunda uto raJehovha rine simba. Jehovha ndeWemasimbaose, saka kana ainesu tinenge tiine simba rinopfuura revavengi vedu pasinei nekuti vakawanda zvakadini. (Vat. 6:16) Tinogona kuva nechokwadi naizvozvo. Funga izvozvo paunoodzwa mwoyo nechimwe chinhu chinoitwa kana kutaurwa nemumwe munhu wekubasa, wekuchikoro kana kuti weukama asiri chapupu. Yeuka kuti hausi wega muhondo iyi. Uri kuita zvaunoudzwa naJehovha.
JEHOVHA ACHARAMBA ACHITIDZIVIRIRA
15. Maererano naIsaya 54:15, 17, nei pasina munhu anogona kuita kuti vanhu vaMwari varege kuparidza?
15 Nyika yaSatani ine zvikonzero zvakawanda zvekutivenga. Hatina bato rezvematongerwo enyika ratinotsigira uye hatiendi kuhondo. Tinozivisa zita raMwari, tinoparidza kuti Umambo hwake chete ndihwo huchaunza rugare, uye tinoteerera mitemo yake. Tinofumura mutongi wenyika yese Satani kuti murevi wenhema uye muurayi. (Joh. 8:44) Tinozivisawo kuti munguva pfupi iri kuuya nyika yaSatani ichaparadzwa, asi Satani nevateveri vake havakwanisi kumisa basa redu rekuparidza. Tichaita zvese zvatinogona kuti tirambe tichirumbidza Jehovha! Kunyange zvazvo Satani aine simba rakakura chaizvo, haana kutadzisa mashoko eUmambo kusvika kuvanhu pasi rese. Izvi zvinoratidza kuti Jehovha ari kutidzivirira.—Verenga Isaya 54:15, 17.
16. Jehovha achaponesa sei vanhu vake pakutambudzika kukuru?
16 Zvii zvichaitika pamberi apa? Pakutambudzika kukuru, Jehovha achatiponesa nenzira mbiri dzinoshamisa. Yekutanga, achaponesa vashumiri vake vakavimbika panguva yaachaita kuti madzimambo enyika aparadze Bhabhironi Guru, zvitendero zvese zvenhema. (Zvak. 17:16-18; 18:2, 4) Yechipiri, achaponesa vanhu vake paachaparadza zvimwe zvikamu zvenyika yaSatani paAmagedhoni.—Zvak. 7:9, 10; 16:14, 16.
17. Kuramba tiri pedyo naJehovha kunotibatsira sei?
17 Kana tikaramba tiri pedyo naJehovha, hapana zvingaitwa naSatani zvinogona kutikuvadza nekusingaperi. Iye ndiye achaparadzwa zvachose. (VaR. 16:20) Saka ramba wakapfeka zvipfeko zvemurwi zvakakwana uye ramba uchizvishandisa! Usaedza kurwa hondo yacho uri wega. Tsigira hama nehanzvadzi dzako. Uye teerera Jehovha. Kana ukadaro unogona kuva nechokwadi chekuti Baba vako vekudenga vachakusimbisa uye vachakudzivirira.—Isa. 41:10.
Zvipfeko zvemurwi zvinomiririrei? (Ona bhokisi rakanzi “ Zvipfeko Zvemurwi Zvinomiririrei?”)
Tinoshandisa sei chipfeko chimwe nechimwe chemurwi?
Ndeipi imwe nzira yatinodzivirirwa nayo naJehovha?
RWIYO 149 Rwiyo Rwekukunda
^ ndima 5 Bhaibheri rinovimbisa kuti Jehovha achatisimbisa uye achatidzivirira. Munyaya ino, tichapindura mibvunzo inotevera: Nei tichida kudzivirirwa? Jehovha anotidzivirira sei? Uye tinofanira kuitei kuti tibatsirwe naJehovha?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Jehovha Anokudzivirira Sei?